Abaphathi kuwo wonke amazinga - abantu abafanelwe zonke izindlela, ngoba emahlombe abo banecala esiningi ekwenzeni imisebenzi, izimpumelelo wenkampani futhi bonke abasebenzi bayaphendula kakhulu. Futhi ngenxa yokuthi Okthoba 16 akuyona lazy kakhulu ukutshela umphathi wakho okungenani ambalwa ngamazwi anomusa, kungalesi sikhathi lapho usuku kumaka iholide professional yabo bonke abaphathi - Usuku World of the boss.
Umlando ivela khona kusibuyisela phakathi nekhulu leminyaka eledlule. Lapho uSuku boss sika kokuqala kwenziwa umphakathi okungenani amalungu omphakathi, iwindi kwaba ngo-1958. Kwathi ngemizamo omunye wesifazane, owayehlala e-Chicago. Igama lakhe kwakungu Patritsiya Beyz Haroski, futhi yayisetshenziswa njengomuzi wokuphumula uNobhala enkampanini okuthiwa StateFarmInsurance. Lokhu sikwenza kungaxegi kwaholela uyise wentombi, kanye nosuku lapho Day boss sika ngombono yayo kufanele ukugubha, kwaqondana lokuzalwa kayise. Ngakho, Patricia wanquma ukubonisana uthando ukumbonga - njengomuntu futhi onekhono. Ngokubona kwakhe, leli holide kwakumane oludingekayo kuwo wonke e-United States, ngoba inani elikhulu labantu ibhizinisi baqashwe kuleli zwe, futhi abaningi babo bangabantu abashisekeli noma abaqondisi.
Khona-ke, eminyakeni emine kamuva, Miss Haroski isinyathelo wabanjwa Illinois Gov. Otto Karner. Wezwa intombazane zamaholide wakhe ezihlongozwayo futhi waba nesithakazelo lo mbono. Futhi maduze nje sivunyiwe ngokusemthethweni. Futhi ngenxa yokuthi ngezinye izikhathi kuma-encyclopedia ngosuku lapho usuku boss zaba khona, ngokuthi 1962. Karner Governor ezihlongozwayo ukuvuma ifomethi elandelayo holidi: usuku, ngokombono wakhe, kufanele ziye subordinated ababaphethe ukuhalalisela bababonge umsebenzi wabo othembekile futhi enobungane nokuphathwa onyakeni owedlule.
Ekuqaleni yasungulwa e-United States umbono sosuku professional kwaba zonke izinhloko ijubane lokukhanya wacosha ngamanye amazwe. Ngokwezwi nezwi igama elithi ngonyaka ozayo, yaqala ukugubha e-UK, e-Australia, e-Republic of South Africa. Futhi kuyo yonke indawo, usuku, lo mkhosi wakhethwa ku 16 Okthoba.
Uyazi uma Usuku boss lugujwa eRussia?
It kuvela ukuthi mhlaka 28 Septhemba ezweni lethu ukugubha professional iholide nabaphathi abo kuyo yonke insimu, ngokusho izibalo, futhi ngaphezulu noma abantu abambalwa, amaningi njengoba 800,000.
Kodwa usuku Okthoba nayo kabakhohlwanga abasebenzi izinkampani eziningi. Kukhona izincwadi eziningi enikelwe izifiso ababusi kakhulu, ngoba ukuthumela amakhadi iholide ephepheni noma ifomu electronic - Imfanelo ezibalulekile celebration ezinjalo, njengoba Day boss. 2013 kulokhu iyathinteka: udondolo amafemu amaningi amakhulu namancane uhalalisele abaphathi bakhe, ufuna ukuchuma impumelelo emsebenzini wakho, ngoba chef - akusiyo kuphela isikhundla, kwabaningi kuba - a ubizo.
Ngakho, umbuzo lapho Day the Boss, siye kakade asebenzelana ngayo. Ngakho, ngo-October 16, ungakhohlwa ukuya kumphathi wakho umtshele ngendlela ujabulele abasebenza ngaphansi kwakhe.
Makreting. Izimpawu umnotho emakethe
Indlela yokutshala horseradish: zokutshala nokunakekela